TANIKO Madagascar - jiosy
Jiosy ve ny Malagasy ?
Ny zavatra lazaina eto ankehitriny - vokatry ny fikarohana nandritry ny telopolo taona.- dia tiana ny manamarika fa miditra lalina sy mikasika ny Fototra izay mbola tsy noresahina firy hatramin'izao, dia ny hoe: Avy aiza ny teny hoe "Madagasikara"? Iza ny "Malagasy" Maninona no "Teny" iray ihany no tenenina eto Madagasikara? Maninona no "sakafo fototra" iray ihany no hanina eto? Inona no atao hoe "fahagolantany"? ary nahoana ny razamben'ny malagasy no atao hoe "gola" - izay fanalahidy famohana ny tantaran'ny firenena? Ary avy aiza ny fiavian'ny andriana merina?
Taon-jobily fanafahana isaky ny 50 taona. Ary faha-40 taona ny jobily fanafahana ny taona 2000 (50 x 40 = 2000 taona)
Ampahafantarina amintsika ankehitriny mazava ny zava-miafina amin'ny tantaran'ity firenena ity. Tantaran'i Madagasikara sy ny Malagasy vokatry ny fikarohana, nataon'ny Malagasy fa tsy vahiny. Marihina etoana fa famintinana izany fikarohana izany no holazaina manaraka eto.
AVY AIZA NY TENY HOE "MADAGASIKARA"?
Amin'ny teny hebreo izany dia hoe: Ma (= Moa) + Daga (= Trondro be) + shakar (= valim-pitia, valin-kasasarana, karama), izay manazava sy manome ny hoe "Madagasikara".
Iza ny "Malagasy"? Avy amin'ny teny hebreo taloha ny teny hoe "Malagasy" ary midika ho "Mpiantsambo" (Hb. = Malakh) izay "mamakivaky" ranomasina na "nandalo dia lasa" amin'ny sisin'ny morontsiraka na "mandalo dia tsy hita nanjavona" (Hb. = gaz) satria lasa niakatra sy nipetraka taty afovoany izy ireo. Tsy iza izany fa ireo Jiosy mpiantsambo niditra teto Madagasikara no atao hoe "Malagasy".
MANINONA NO TENY IRAY IHANY NO TENENINA ETO MADAGASIKARA?
Das (Hb) = Man-jaka (Mlg)
MANINONA NO "SAKAFO FOTOTRA" IRAY IHANY NO HANIN'NY MALAGASY?
Na aiza na aiza eto Madagikara dia "vary" no foto-tsakafon'ny Malagasy.
Ny Jiosy taloha dia nihinana varim-bazaha karazany roa, dia ny "vary tritika" sy ny "vary ordea". Ny teny hoe varim-bazaha" (blé) anefa dia "bar" na "var" no anarany amin'ny teny hebreo taloha. Noho izany, naverin'ny Malagasy ny anaran'ny foto-tsakafon'ny Jiosy taloha nony tonga teto Madagasikara izy ireo.
INONA NY "ZAVA-MANENO" MAMPIAVAKA NY MALAGASY?
Ny "valiha" no zava-maneno voalohany sy mampiavaka ny Malagasy ary iraisan'ny ankamaroan'ny foko malagasy na dia misy endriny isan-karazany aza eran'i Madagasikara.
Ary misongadina sy malaza amin'izany ny "valiha tory folo". Ny zava-maneno izay notendren'ny Jiosy araka ny Baiboly hebreo taloha dia ny valiha, indrindra ny "valiha tory folo" (Salamo 33 : 2 na 144 : 9). Raha jerena ny zava-maneno notendren'i Davida Mpanjaka dia "nevel" ny fototeny, ary "nevalin" no anarany. Ny "valiha" malagasy izany no "nevalim" amin'ny Jiosy taloha.
INONA NO ATAO HOE "FAHAGOLANTANY" ARY NAHOANA NY RAZAMBE NO ATAO HOE "GOLA"?
Teo amin'ny voambolana malagasy dia nampiasa ny teny hoe "fahagolantany" ny Malagasy ilazana ny tamin'ny "tanin'ny Gola". Misy ifandraisany amin'ny teny hebreo taloha 'Golah" ve ny teny hoe "gola" amin'ny teny malagasy?
Raha misy, ny Razamben'ny Malagasy "gola" dia tsy inona fa ireo Jiosy "babo" tany Babylona (teo amin'ny 577 - 539 talohan' J.K.) nantsoina amin'ny anarana hoe "Golah". Koa raha marina fa "Golah" ny razamben'ny malagasy dia tsy maintsy hita amin'ireo Boky roa izay mirakitra ny anaran'ireo taranaka niverina avy tany amin'ny Fahababoana, dia ny Bokin'i Ezra sy Nehemia. Ezra 2 : 37 sy Nehemia 7 : 40 no ahitana ny taranak'Imer, izay manazava foko roa eto Madagasikara, dia fokon'Imer nanome anaran-tany hoe "Imerina" sy nahatonga ny foko "Merina", Jiosy avy any Indonezia; ny faharoa dia ny foko An-te-Imor (= Vahoaka Imor), Jiosy avy any Arabia - Afrika, nanome ny "Antemoro".
ARY AVY AIZA NY FIAVIAN'NY "ANDRIANA MERINA"?
RATEFY Tolotra, Mpitandrina
Antananarivo, Mey 2000
Ratefy Tolotra dia Mpitandrina, nandalina Teolojia, Hebreo, Arameana sy Akadiana tany amin'ny Oniversiten'i Münster, ary ny Fitsaboana Alemana.
Nanao fikarohana mitondra ny lohateny hoe "Sind die Madagassen Jüden." midika hoe: "Jiosy ve ny Malagasy"? Jereo ny Famelabelarana nataony (vidéo: 01:00:32)
Tsara fantarina koa ny mikasika ny Fiombonamben'ny Taranaka Andriana Miray eto Madagasikara na TAMIMA, sy ny "Tantara miafin'i Madagasikara".
Tonga soa eto amin'ny lanitr'i Gasikara !
A l'assaut des Tsingy de Bamaraha (video)
Descente dangereuse des Tsingy (diaporama)
Tantarantsika + Tetiarana
Doctorat:" Le grand secret de l'Islam"